XOG XASAASI: Daahir Geelle ‘‘DF Somaliya ma taqaano wada-hadal ee dad ka adkaansho ayay taqaanaa‘‘! | HalQaran.com
Home Wararka Maanta XOG XASAASI: Daahir Geelle ‘‘DF Somaliya ma taqaano wada-hadal ee dad ka...
XOG XASAASI: Daahir Geelle ‘‘DF Somaliya ma taqaano wada-hadal ee dad ka adkaansho ayay taqaanaa‘‘!
Kismaayo (Halqaran.com) – Wasiirkii hore ee Warfaafinta Dowladda Soomaaliya Daahir Maxamuud Geelle oo Khudbad ka jeediyay Xafladda Caleema saarka Madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madoobe ayaa ka hadlay qodobo dhowr ah.
”Marar badan waxaa laga hadlaa Hanaanka la rabo in wax isku badalaan, maadaama dowladda Waqtigeeda uu sii dhamaanaayo dhibaatooyinka xoogoodu waxay ka yimaadeen dad raba sidda ay ku yimaadeen si aan aheyn in ay ku jooggaan ama Al-baabkii ay kasoo galeen la xiro oo aan dib loo furin, Al-baabkaasi hadii uusan furnaanin darbi kale ayaa duma marka waxaa la rabaa Cida hoolka timaada in ay ogaato hanaankii ay ku timid” ayuu Mar kale yiri Wasiirkii hore ee Warfaafinta Daahir Maxamuud Geelle.
Wasiirkii hore warfaafinta